Umntwana wakho waya enkulisa okanye esikolweni iSasha okanye iMaska, waza wabuyela eTeletubbies, Ochkarik okanye iGiraffe ... Waqulunqa igama ngaye ngothando nangothando, kunye neentanga ezibukhali zatsho ligama, lifuna ukudlala iqhinga, lidibanise okanye likhubekise. Kodwa musa ukukhawuleza ukuba uqonde ukuba ubani omele uxanduva, ubalekele iinkcazo kubaphulaphuli, uxabane nabazali babo. Cinga ngesizathu sokuba umntwana wakho wabizwa njalo okanye kunjalo? Kwaye, nantoni na amagama amabizo ebantwaneni bethu athi? Uya kumangaliswa, kodwa kakhulu! Funda ukufikelela ekupheleni - into enomdla kakhulu.
Amagama omnxeba kunye "neefowuni" - uvavanyo lokuqina, oludlula phantse nayiphi na umntwana. Ngoko ukuthetha, umrhumo ekuhlaleni. Iqela labantwana bebancinci libonisa umdlalo othakazelisayo "Ndingumhlobo / ndingenabungane", "siyamkela / ayamkeli". Igama lesiteketiso lingaba yilele "yomnye umntu" okanye uphawu lokubamkela "lomntu".
Abantwana bangakwazi ukuza nesiteketiso okanye i-teaser:
• Ukutsala ingqalelo yomntu okhwabanisayo, okanye abanye. Kuyathakazelisa kakhulu - xa oontanga enitshitshisa ngeklasi! Ngamanye amaxesha ukukhwabanisa akuqondi into enokumcaphukisa kunye nomsindo.
• Njengempendulo yokukhusela. "Ndimncinci, nangona iiglasi. Andiyazi indlela yokulwa. Kuhlala nje ukubiza umnxeba ngakumbi, ukuba wakhele igama lomnxeba. "
• Ukuzifakazela ngendleko yontanga engakhuselekanga, bonise wonke umntu "ongumphathi" eklasini okanye kwiqela.
• Ukuphindezela ukuhlambalaza, okwenene okanye okucinga
• Ngeentlanzi, ngaphandle kobubi.
• Ngaphantsi kwefuthe lefilimu eyaziwayo, imifanekiso.
Ishak noMasyanya: zivelaphi igama lomdlalo.
Ngokuqhelekileyo, igama lesidlaliso livela kwi-sineli okanye igama. Ngoko le nkwenkwana uKostya iba yintonga, intombazana uSoloveva - Nightingale. Amagama amaninzi angathathi hlangothi, okanye angase ahlasele. Uneminyaka engama-9 ubudala uMisha wayecaphuke gqitha xa, ngokuguquguquka okulula-uMisha-Mishak-Ishak wathola isidlaliso. "Ukuhlambalaza ukuba nguIshak - lowo bahamba ngayo!"
Umhlaba ocebileyo wegama lomnxeba unika ukubonakala komntwana. Ukukhula, ukwakha, ubuso obusweni, iinkcukacha ezingavamile zeengubo - isohlo elibukhali labaontanga liqaphela konke. Umde, inkwenkwe eqinileyo inokuba ngu-Elk, kunye ne-Rachit encinci.
Ngamanye amaxesha amanqaku omnxeba anikezelwa ngeempawu ezithile, iimpawu, izinto zokuzilibazisa. I-Pyatiklassnik uSasha wathandaza iimoto zeMercedes, waqokelela ama-candy wrappers kunye nemifanekiso yazo kwaye bonke baqhayisa ukuba xa ekhula, uya kuthenga ii-"Mers" ezingamakhulu mathandathu. Kunengqiqo ukuba "iMercedes" wayebizwa ngegama, kwaye le nickname wayeziqhenyce.
Kwaye umdlalo weqheno unokuba yinxalenye yomdlalo odlala indima, xa abantwana "badlala" kwiimpawu ezithandwayo kwiimifanekiso okanye kwiimifanekiso. UWinnie uPooh kunye nePiglet - ngokuqhelekileyo kubantwana beklasikhi. Ngesinye isihlandlo, izikolo zazisusa iifayile zabalinganiswa be "X-Files" - kwakukho abaMeldors abangenakubalwa (okanye i-Foxes nje). Skinner ne Scully. Kuze kube ngoku, ukubukela i-Disney iimifanekiso, abantwana babiza abahlobo beChip kunye neDale, iZzhik, iGadiget, iSroroge. Kwiminyaka yamuva, uMasanya, uHrundel wongezwa kuloluhlu. Iyonke inkampani uSmesharikov kunye nabanye abalingiswa beetoto.
Ewe, ukuba igama lomnxeba linjengomntwana okanye uyamphatha ngokuzinzile. Ewe, ukuba uyacaphuka, uyakhala, ulwa? Yintoni abazali abayenzayo: ukujongana nabaphulaphuli, isikhalazo kumfundisi, uthumele umntwana kwesinye isikolo?
Ngamanye amaxesha kumabakala aphantsi, intombazana ethile i-Sveta iyaxutywa nge-napkin elula. Kwaye ngokukhawuleza, ngokwenene ezintandathu ezintandathu, uba "nguSvetlana-Beauty". Kwenzekani? Ewe, umbono wakhe wangaphakathi, kwaye, ngoko ke, ukubonakala kwakhe, kwatshintsha, kuba kuxhomekeka kakhulu kukuzithemba, ukuzibona. Kwaye igama elide lomnxeba lawa njenge-peel.
"Ngubani ozibizayo, yena ngokwakhe ubizwa ngokuba nguye!"
"Ukufundisa ukuzithemba, ukuphelisa ukungaphumeleli" - iingcebiso zehlabathi jikelele. Kodwa ke, yintoni omele uyenze "apha nangoku" xa umntwana wakho evela e-kindergarten okanye esikolweni ngezinyembezi?
Iingcali zengqondo azicebisi "ukusuka kwindawo" ukukhawuleza ukujongana nabaphulaphuli. Okokuqala, umntwana wakho unokufumana idumela ngokuthi "i-sneak pee" njengesiphumo. Okwesibini, uya kusebenzisa amandla akhe okujamelana nobunzima bakhe ngaphezu kweyodwa. Okwesithathu, ukuba ukungenelela kwakho akuphumelelanga, uya kulahleka inxalenye ebalulekileyo yegunya lakho emehlweni kwonyana wakho okanye intombi yakho. Okwesine, kunokwenzeka ukuba umntwana wakho uvakalelwa ngokomoya ngokwaneleyo.
Ngoko, ukhetho "ukuza esikolweni kunye noloyiko konke" lushiywe kwiimeko ezinzima, esimele sijamelane nazo ngokuthe rhoqo. Ezi ziimeko zentshutshiso echanekileyo, ukuthotywa ngokuchanekileyo, xa bonke behlangene nomnye. Kodwa nangona kunjalo, kungakhathaliseki ukuba ulungeleleneyo umsindo, kuya kuba luncedo ngakumbi kumntwana ukutshintshela kwesinye isikolo. Ngokubhekisele kwii-call-teasers eziqhelekileyo, nayiphi na umntwana uyakwazi ukufunda ukumelana nabo.
Chaza kumntwana: igama liyimveliso yehlabathi, ayigwenywa ngabantu abaphumelelayo. Umdlali wodumo owaziwayo, u-Anna Kovalchuk omhle, odlala uMargarita, afunda nabo esithi "Lom" - ukukhula okuphezulu. I-actor Vladislav Galkin, oyintloko "itekisi" yeli lizwe, ebuntwaneni bakhe yayingu "Kulka" kuphela. Umbhali uAlexander Green, umbhali we-Scarlet Sails, waphoswa kwi-gymnasium ngesiqhwala esithi Green-Blin (igama lakhe langempela lalinguGritsvsky). Emva koko le nickname yaba yintsimi yakhe. Nabapolitiki abadumileyo? Ngokuqhelekileyo bafumana amanqaku amaninzi anetyhefu, athi "uLuhohok" kunye no "Zhirik" awonakalisa kakhulu!
Nika umzekelo wabantu abadumileyo, unokuxelela indlela ozibiza ngayo ebuntwaneni. Cacisa ukuba igama lesiteketiso ngumqondiso ukuba uye waphawula ukuba awuyindawo engenanto kubontanga bakho. Zizame ukuza kunye namaqhinga ahlekisayo egameni lakho okanye igama lakho, ukhuphisana, ngubani oza kuphuma ngaphezulu. Oku kuya kunceda umntwana ukuba ayeke ukuthukuthela. Yaye ukuba uyafunda ukuphendula ngaphakathi ngoxolo-isiqingatha sengxaki sele isisombulule!
Kule minyaka yobudala bentanga, ukuguqula isimo sakho sengqondo kubaculi kunokuba nzima kakhulu. Ewe, ke kufuneka ufundise okungenani "ukulungele" ukuphendula uphendule kubo.
Iingcali zengqondo azicebisi ukuphendula kwiifowuni "ekunyuseni" Ukulwa nomxhaphazi akuyona into ekhethekileyo: mhlawumbi kwakuyilwaphulo ayefuna ukuyiphukisa. Ukubonisa ukucaphuka komsindo, umntwana unakho ukulungelelanisa, ubonisa amaphupha ayo obuthakathaka, kwaye ukukloloda kuya kuba mnandi ngakumbi kubaontanga.
Cacisa oku kumntwana. "Xa ukhubekiswa ngamagama omnxeba, ufana nedoli, kunye nabo baxhatshazwayo - njengabaphandi. Bawudonsa iintambo kwaye bakulawule njengoko bafuna. Kwaye ungabavumeli ukuba benze. "
Indlela efanelekileyo kukuba ungaphenduli kwaye ungaphenduli kwii-imeyile. Emva koko umcukisayo uya kuba engathandekiyo, kwaye abaphulaphuli baya kushiywa emva. Ingeniso kwaye ufunde nomntwana ibinzana eliqhelekileyo: "Ngubani owamshayelayo? Kum? Igama lam nguSasha. Ukuba ufuna ukuthetha, ndibize ngegama. " Phinda uhlaziye indlu ukuze umntwana akwazi ukuvakalisa la mazwi ngokuzithelekileyo, ngokuzimelela nangokuqinile.
Olunye ukhetho luyimpendulo engavumelekanga. Kwiklasi yokuqala, inkwenkwe uDima yafumana isiteketiso "Odnozuby Bull" - ngenxa yokugubha kwayo nokukhawuleza. Xa wayebizwa kanjalo, wayehlala ehlasele ekulweni kwaye ngokuqinisekileyo waqinisekisa igama lakhe lomnxeba. Abazali bakhe bamcebisa ukuba aphendule umntu owonayo ngokuzayo: "Ngaba uthetha konke? Emva koko ndishiye ndedwa. " Kwaye loo mfundi odibana naye ... wawa emva.
Abantwana abancinci bancedwa ngokugqithiseleyo ngokuthi "izizathu" - imfutshane emfutshane engakhankanywa ngokuphendula:
Undibizele - uguqulela kuwe.
Ngubani obiza, ngulo gama!
Ingwenya yayihamba-ilizwi lakho lagwinya. Washiya wam!
Ziyakuvumela ukuba uzikhumbule umoni, ushiye igama lokugcina emva - kwaye ngexesha elifanayo "ukukhupha" ingxabano.
Enye indlela kwiforamu ye-intanethi eyanikelwa ngumama onamava:
"Ndifundise umntwana wam phakathi kwinqanaba eliphakathi indlela yokuphendula. Kukho, kwakhona, zonke izitolimagama zavela, kwaye wacaphuka kakhulu. Saqala ukudlala kwimibutho, sicinga kunye nabo okanye nokuba kunokwenzeka ntoni ukuthelekisa ababenecala. Uyabizwa, kwaye uyaphendula: "Ufana ne-apula eluhlaza-njalo unomuncu" okanye "Ufana nesibane sokukhanya esitshisa ngonaphakade." Kuye kuthi kudlulile kumdlalo. Yaye ihlazeka kwaye imeko ikhutshwe. Bayeka ukubiza amagama. "
Bazali, qaphele ukuba zeziphi iziganeko ezithandwa ngumntwana kuye, yiyiphi isidlaliso esiyithandayo. Ngokomfanekiso wakhe, "upakishwe" kwisiza lomnxeba, umntu obhala ngeempawu ezibalulekileyo eziyimpawu, oko akufunayo. Igama lomnxeba linikeza uluhlu oluthile lweempawu zento umntu adibana naye! Oku kubizwa ngokuthi "intsebenzo ye-halo yentlalo". Akumangalisi ama-Indiya, kwaye oookhokho bethu bahlala bethatha igama lezithemthi, badibene nolunye uhlobo lwesilwanyana. Ibhere ithetha ukuqina kwaye uphilile, iWolverine ibuqili, ibukhali, iguquguqukayo.
Isiteketiso sesigxina sinokuqinisa kwaye sondla ezo zimpawu ezigxininiswe kuyo. Ukuba umntwana wakho ubizwa ngokuba yi - Terminator yesikolo - kunengqiqo ukucacisa, kukuphi i-movie, oko kukuthi. "Okulungileyo" okanye "okubi". Ukuba umntwana weza kunye nesiteketiso "Batman" - ngoko, ufuna ukuqina, ukhaliphe kwaye azimisele, njengeqhawe elithandayo. Kwaye ... uya kumnceda ngandlela-thile.
Kukho iresiphi yendawo yonke - indlela yokugcina ngokuqinisekileyo indodana okanye intombi yakho kwiimpawu zokunyusa ezihlaselayo. Yilula: phatha umntwana wakho ngenhlonipho, njengomntu omdala ohloniphekileyo ovela kwindawo yakho! Yazisa iimpawu zayo kwifom apho zikhona. Umntwana othandwa kwaye ohlonelwayo kwintsapho unokuhlukaniswa nokuqala. Le "halo yentlonipho", njenge-halo, iyakujikeleza kwaye iyamkhusela, inika ithemba. Abantwana abanjalo abayi kuhlaziywa. Kwaye nangona banesiphako sentsingiselo, ukungaphumeleli kwangaphandle - amagama amabizo ahlaselayo kubo awanamatheli.
Indlela yokukhetha umqhubi wengane yakho
Unyango - i-cystitis, ukuvuvukala kwesibindi
Ukuqhelana nomntu wasemzini kwiindawo zokuthandana
Silahlekelwa isisindo ukuze sizuze thina
Ityuwa kumchamo womntwana